सपनामा मन्दिर गएको देखेमा के हुन्छ ? हेर्नुहोस् ! | Bharosha News
Home मनोरञ्जन सपनामा मन्दिर गएको देखेमा के हुन्छ ? हेर्नुहोस् !
सपनामा मन्दिर गएको देखेमा के हुन्छ ? हेर्नुहोस् !
हामिले सुतेको समयमा सपना देख्नु सामान्य कुरा हो । सपनामा देखेका केही कुराहरुले जीवनमा प्रभाव पार्ने ज्योतिष शास्त्रमा पनि बताइएको छ । शास्त्रमा सपनामा देखेका चीजहरुले भविष्यमा कस्तो संकेत गर्ने गर्छ भन्ने बारे बताइएको छ । सपनालाई मानिसको मनोविज्ञान बुझ्ने माध्यमको रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । भने कसैले यसलाई अलौकिक शक्तिको रूपमा पनि हेर्ने गर्दछन्।
यस्तै यदि तपाईले सपनामा मन्दिर गएको देखेमा के हुन्छ होला रु मन्दिर गएको’ सपनालाई पनि थुप्रै दृश्टिकोणले हेर्न सकिन्छ ।
भाकल– यदि सपनामा मन्दिर गएको देखेमा मन्दिरको सपनालाई अलौकिक शक्ति र ‘भगवान’ले मानिससँग अन्तरक्रिया गर्न खोजिरहेको बुझिन्छ । भगवानले दिएको आशिर्वादको धन्यवाद दिन बाकीँ रहेको भन्ने बुझिन्छ । मन्दिर गएको सपना देखेमा केही भाकल छ भन्ने कुझिन्छ । त्यसपछि आफ्नो भाकल पुरा गर्न मन्दिर जानुपर्दछ ।
Previous articleकोरोना संक्रमणबाट मोरङमा एक जनाको मृत्यु
Next articleकोरोना संक्रमणका कारण थप दुई जनाको मृत्यु
चीनको वुहान शहरबाट पूर्ववत रुपमा आन्तरिक उडान सुरू, जनजीवन सामान्य बन्दै
एजेन्सी : कोरोना भाइरस महामारीको केन्द्रका रुपमा चिनिएको चीनको वुहान शहरबाट पूर्ववत रुपमा आन्तरिक उडानहरू सुरू भएको छ । वुहान तियान्हे अन्तर्राष्ट्रिय...
भाईरल अर्जुनको जिबनमा आधारित पहिलो म्युजिक भिडियो यस्तो बन्यो ,हेर्नुहोस् !
४ भदौ, काठमाडौं : बिशाल निरौलाको स्वर तथा संगीतमा नयाँ निकै मन छुने गीत “छोडेर गयौ नि” पनि भर्खरै सार्वजनिक भएको छ...
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) समाजमा राम्रा काम गर्न सकिने हुनाले मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ । विशिष्ट तथा बौद्धिक...